Inpeller O-ring-064 Inpeller O-ring-064 Winclan factory Sijabulela amandla aqinile wezobuchwepheshe, izixhobo ezinhle kakhulu nezinsimbi zokuhlola eziphelele, ukuze sikwazi ukukunikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngentengo yokuncintisana. Xhumana Nathi Mayelana Nathi / Umgomo wethu uyikhwalithi enhle, ngesikhathi sokuthunyelwa, inani lentengo elifanele. Kusukela ekuqaleni okuncane ngo-2004, iWinclan Pump ikhule yaba ngumdlali owesabekayo emakethe yamaphampu yamazwe omhlaba. Singabantu ...
Slurry Pump Expeller Ring-029-A05 Slurry Pump Expeller Ring-029-A05 Winclan factory Sijabulela amandla aqinile wezobuchwepheshe, izixhobo ezinhle kakhulu nezinsimbi zokuhlola eziphelele, ukuze sikwazi ukukunikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngentengo yokuncintisana. Xhumana Nathi Mayelana Nathi / Umgomo wethu uyikhwalithi enhle, ngesikhathi sokuthunyelwa, inani lentengo elifanele. Kusukela ekuqaleni okuncane ngo-2004, iWinclan Pump ikhule yaba umdlali owesabekayo ku-Intern ...
I-Slurry Pump Expeller-028-A05 I-Yaobang Slurry Pump Expellers ingu-100% iyashintshana nepompo ye-AH slurry. 1.5 / 1B-YA Ikhodi yeSlurry Pump: B028 2 / 1.5 B-YA Slurry Pump code: B028 3/2 C-YA Slurry Pump code: C028 4/3 C-YA Slurry Pump code: D028 4/3 D-YA Slurry Ikhodi yepompo: D028 6/4 D-YA Slurry Pump code: DAM028 6/4 E-YA Slurry Pump code: E028 8/6 E-YA Slurry Pump code: EAM028 10/8 ST-YA Slurry Pump code: SH028 12 / Ikhodi engu-10 ST-YA Slurry Pump: SH028 14/12 ST-YA Ikhodi yeSlurry Pump: SH028 ...
I-AF Froth Foam Pump
I-AF Froth Foam Pump FROTH SLURRY PUMP AF series AF series froth slurry pump is inkampani yethu ekhiqiza ukusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla, okwenziwa ngeShijiazhuang Pump Works'introduction technology of Australia Pump Company. Izici: Isakhiwo sezinhlamvu ezimbili, asikho isidingo sanoma iyiphi i-shaft seal namanzi wokuvala ukusebenza kahle okuphezulu, gqoka ukumelana, ukusebenza okuzinzile, ukuhlangana okulula, ikhono elihle lokuphula umfutho, futhi uqhutshwe ngebhande. ukucacisa kweModeli okwedlulele ...
Kuqondile Sump Pump
I-YS Sump Slurry Pump YS Sump Slurry Pump I-YS series Vertical Sump slurry Pump yenzelwe izinhlelo zokusebenza ezidinga ukuthembeka okuphezulu nokuqina kunamaphampu wenqubo evamile mpo. Imininingwane ethile ngokulandelayo: Ukukhishwa kwe-Diameters 1.5 ″ kuya ku-10 ″ (40mm kuya ku-250mm) Ibanga le-Heads kuya ku-160ft (50m) Flow Rate to 6,000gpm (1,350m3 / h) Incazelo yemodeli: 40PV-YS 40: I-Outlet Diameter PV: i-vertical tray YS : Yaobang futha YS uchungechunge YS futha kunzima ukwakhiwa kwensimbi, YSR p ...
I-YS Sump Slurry Pump YS Sump Slurry Pump I-YS series Vertical Sump slurry Pump yenzelwe izinhlelo zokusebenza ezidinga ukuthembeka okuphezulu nokuqina kunamaphampu wenqubo evamile mpo. Imininingwane ethile ngokulandelayo: Ukukhishwa kwe-Diameters 1.5 ″ kuya ku-10 ″ (40mm kuya ku-250mm) Amabanga we-Heads kuya ku-160ft (50m) Flow Rate to 6,000gpm (1,350m3 / h) Incazelo yemodeli: 40PV-YS 40: I-Outlet Diameter PV: i-vertical tray YS : Yaobang futha YS uchungechunge YS futha kuyinto ukwakhiwa kwensimbi kanzima, YSR futha kuyinto r ...
I-YG Gravel Pump YG uchungechunge Sand Gravel Pump YG uchungechunge Sand Gravel Pump isigaba esisodwa, ikesi elilodwa, ipompo evundlile ye-centrifugal. Ukugeleza kwendlela enkulu kwenza ipompo livumele izinhlayiya ezinkulu. Isakhiwo esilula ne-chrome alloy liner ephezulu yenza iSand Gravel iphompe impilo ende nokugcinwa kulula. Imininingwane ethile ngokulandelayo: Ukukhishwa kwe-Diameters 4 "to 16" (100mm to 400mm) Heads Range 230ft (70m) Flow rate 8,000gpm (4,100m3 / h) Casing Pressure Tolerance 300psig (2,020kPa) Model meani ...
Imayini YJ Yamalahle Yamapulangwe
I-YJ Imayini Yamalahle I-Plup Pump Uchungechunge lwe-YJ Heavy Duty Slurry Pump luvundlile ngesiteji esisodwa, ukudonsa okulodwa, ukudonsa kwe-axial kanye ne-centrifugal slurry double-casing pumps. Igatsha lokukhipha lingabekwa ngezikhathi zamadigri angama-45 ngokucela futhi liqondiswe kunoma yiziphi izikhundla eziyisishiyagalombili ukuze zilungele ukufakwa kanye nokusetshenziswa Ukucaciswa: Amandla / Ukugeleza: 4-2500m3 / h Inhloko / Ukuphakamisa: Isivinini esingu-9-130 m: i-rpm Amandla: 0.55- 800kw Ubuningi obumaphakathi: i-PH yeMed ...
I-YL Ultra Heavy Duty Pump
IZIPHUMA ZEYL Heavy Duty Pump • Usayizi ububanzi (ukukhipha) 2 ”kuye ku-4” 50 mm kuya ku-150 mm • Amandla ku-1,000 gpm kuya ku-250 m3 / hr • Amakhanda kuya ku-150 ft kuye ku-46 m IZINZUZO • Ukuhlanganisa umhlangano - ishafu enkulu yobubanzi I-overhang emfushane inciphisa ukuphambuka futhi inegalelo empilweni ende yokuthwala. Kudingeka ezine kuphela ngamabhawodi okubamba izindlu zohlobo lwe-cartridge ohlakeni. Ama-Liners - amalitha angashintshwa kalula aboshiwe, angagxunyekwanga, kubhokisi lokunamathiselwa okuhle nasempumalanga ye-ma ...
YH High Shona slurry Pump
I-YH High Head Slurry Pump Isingeniso Uhlobo amaphampu we-YH slurry amaphampu we-cantilevered, ovundlile, we-centrifugal slurry. I-liner plate plate kanye ne-impeller yempompo ye-YH zenziwe ngensimbi emelana nokugqoka. Izimpawu zamashaft zochungechunge lwe-YH zingakhetha uphawu lwe-gland noma uphawu lokuxosha. Igatsha lokukhipha lingabhekiswa kunoma yiziphi izikhundla eziyisishiyagalombili ukuhambisana nokufakwa kanye nokusetshenziswa. Isicelo Senzelwe ukuphathwa kwama-slurries aqine kakhulu, aphezulu kakhulu ku-metallu ...
YA ujenga slurry Pump
I-YA Lined Slurry Pump YA series Centrifugal Slurry Pump YA series Centrifugal slurry Pump is a end-suction, split-case, centrifugal slurry pumps, ilungele imvelo empofu emayini. Izingxenye ezingama-27% zensimbi emhlophe ye-chrome noma izingxenye zerabha ezimanzi zenza ipompo ibe yimpilo ende, futhi isakhiwo esilula senza ukugcinwa kwepompo kanye nokushintshwa kwe-liner kalula.Impompo yochungechunge lwe-slurry eyenzelwe imisebenzi emangele ngenkathi inikeza ukusebenza okuphezulu, kuyinhlanganisela ye-YA eqinisekisiwe ehlukile fe ...